Nagu saabsan - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
KingHow Ilaa 2005
Sida soo saaraha boorsada, waxaan soo saareynaa boorsooyin badan oo ka badan 15 sano. Iyada oo heerkeena tayo sare leh iyo adeegga macaamiisha, waxaan iskaashi la sameynay macaamiisheenna si aan u soo saarno alaabada ugu wanaagsan ee la tolay.
Waxaan ku qanacsanahay macaamiisheenna adduunka oo dhan, kuwaas oo naga dhigay kuwa guuleysta oo aan sannado badan ku dhex jirnay warshadan. Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan sii wadnaa bixinta tayada sare iyo qiimaha ugu fiican ee macaamiisheena si looga dhigo inay guuleystaan. Kusoo dhawow macaamiil badan si aad ula xiriirto oo aad uhesho xiriir dheer.
Meelahayaga ugu muhiimsan ee wax soo saarka waxaa ka mid ah boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka duffel, bacaha qalabka, boorsooyinka dharka, baakadka dhexda, boorsooyinka dugsiga iyo kuwa kale ee khuseeya bannaanka, jimicsiga isboortiga, safarka, ku noqoshada dugsiga, qalabka aaladda, laptop-ka dhijitaalka ah iyo ujeeddada suuqgeynta Waxaan sidoo kale qaadnaa badeecooyin kala duwan oo alaabooyin isku xiran oo ku saleysan kheyraadkeena, sida teendhada kaamka, koofiyadaha & koofiyadaha, dalladda & koodhka roobka, dharka, tolida dharka iyo waxyaabo kale oo badan.
Macaamiisheena, waxaan u balanqaadeynaa waxyaabaha soo socda
● ballanqaadkeena tayada iyo sharaf la'aanta
Qiimaheena ugu fiican ee suurtogalka ah, ha ahaato wax soo saar ama wax soo saar
Products alaab tayo sare leh oo u dhiganta tilmaamahaaga
● gaarsiinta waqtigeeda kuna siiso xalka rarka wanaagsan tixraaca
Waxaan nahay macashaada xalka. Booqo bogga xiriirka inaad wacdo, soo dirto e-mayl, oo aad maanta bilawdo.